Somalia oo ka jawaabtay Hadal kasoo yeeray Kenya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Somalia oo ka jawaabtay Hadal kasoo yeeray Kenya
Somalia oo ka jawaabtay Hadal kasoo yeeray Kenya
Wasiirka warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo BBC-da la hadlay ayaa beeniyay in Dowlada Soomaaliya ay ogeyd in wafdigii Kenya ee ka qeyb-galay caleemo-saarkii Axmed Madoobe ee Kismaayo.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo la hadlay BBC Somali ayaa sheegay in wafdigii tagay Kismaayo ay halkaas ku tageen “ogolaanshaha dowladda Soomaaliya.
Balse wasiir Maareeye ayaa yiri: “Warka uu sheegay agaasimaha guud meelo badan ayuu taabanayaa, laakiin qodobka ah diyaarad iyo madaxda Kenya ka tirsan kuma xadgudbin Soomaaliya waa war aan waxba ka jirin”.
“Waa la ogyahay in dowladda Soomaaliya ay warqad soo saartay oo ay tiri diyaarad kasta oo Kenya ka imaaneysa ceddii doonta ha saarnaatee, waa in ay soo martaa Muqdisho, taas ayay wafdiga iyo diyaaradda tagtay Kismaayo ay jebiyeen,” ayuu yiri wasiirka.
Previous articleXogta-Xogdoon: Xukuumadda Khayre oo Cadaadis adag saaraysa Maamul Goboleedyada
Next articleAkhri Magacyada rag ka tirsnaa Al-shabaab oo Saaka Xukun lagu riday